Fanarenana indray ny toekarena ao Karaiba na mitatao aza ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Ahoana ny hoavin'ny fizahantany ao amin'ny faritra Karaiba?
Voadika ny 05 Jona 2020 11:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Ελληνικά, Français, عربي, English
Fivezivezena mandritra ny fotoana isian'ny COVID-19. Sary an'i Prachatai ao amin'ny Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
Noresahan'ny fizaràna 1 tamin'ity andiany ity ny sata misy ny ady atao amin'ny COVID-19 ao Karaiba tany am-piandohan'ny Jona 2020. Ato anatin'ity fizaràna faharoa ity, hojerentsika ny fomba eritreretin'io faritra io hanokafana indray ny toekareny, izay miankina betsaka amin'ny fizahantany ny ankabeazany.
Taona zina ny 2019 ho an'ny fizahantany tao Karaiba. Avy eo, tany amin'ny faramparan'ny taona, nipongatra ny COVID-19. Ny vokany dia valanaretina iray izay nitarika ny Fikambanana ho an'ny Fizahantany ao Karaiba hanome anarana ilay viriosy ho “ilay mpitsidika tsy niriana”, tanatinà andiana “podcasts”.
Amin'ny maha-loharano goavana ho an'ny fifanakalozana ivelany sy loharanon'asa ho an'ny ankamaroan'ireo firenena ao Karaiba, nanomboka tamin'ny volana May dia lasa tena maika ny tsy maintsy hanokafana am-pitandremana ny sisintany hidiran'ireo mpitsidika avy any ivelany, farafaharatsiny aloha amin'izao fotoana izao ho an'ny ampahany amin'ireo faritra sasany izay toa manana fifehezana tsara ny tarehimarik'ireo tranganà COVID-19 ao aminy.
Na izany aza, raha nisy vitsivitsy ireo nosy nanambara fa vonona ary efa nametraka daty mihitsy — vonjimaika na hentitra — ho amin'ilay fisokafana, ny hafa tsy mbola tonga amin'izay dingana izay. Tsy te-hametraka daty mihitsy hirosoana amina fisokafana ny sasany.
Fanokafana ny fitsangantsanganana
Isan'ireo nanao fanambaràna fanokafana ny fandraharahàna amin'ny volana Jona i Antigoa sy Barboda, izay handray ny sidina voalohany ao aminy avy any Etazonia ny 4 Jona, ary St. Lucia, izay nanambara fa handray “tsikelikely ny fomba firoso tomponandraikitra amin'ny fanokafana indray ny sehatry ny fizahantany” amin'io andro io koa — na eo aza ny fanitàrana ny hamehana ara-pahasalamàna ao an-toerana ho hatramin'ny Septambra.
Afaka mitehin-tratra i Belize, firenena iray ao Karaiba any amin'ny morontsiraka avaratra-atsinanan'i Amerika Afovoany, noho ny tsy nahitàna trangana COVID-19 tao aminy efa ho volana iray mahery izao; arahan'i Grenada sy ny nosy Holandey ao Aruba, toa efa vonona ny hanokatra ato ho ato ny sisintany. Na iray aza, tsy mbola misy anefa tamin'ireo firenena ireo nanambara daty. Bonaire, mpifanila vodirindrina amin'i Aruba, izay tsy misy trangan'aretina ihany koa, dia hampiato amin'ny 15 Jona ny fandraràny ny fivezivezena.
Mandritra izany, ny Nosy Virjiny amerikàna dia nisokatra indray ho an'ireo mpizahatany tamin'ny 1 Jona teo, na mbola mipetraka ho hatramin'ny 11 Jolay aza ny fepetra noho ny hamehana ara-pahasalamàna ao aminy.
Maka milamina, na eo aza ny akoralava
Ireo Nosy Cayman (misy mponina 64.000) dia tsy nametraka daty ho fiverenana tanteraka indray amin'ny fiainana andavanandro, na mikasa aza ny andrimpanjakana iray misahana ny fahasalamàna any an-toerana fa hanao fitiliana fanefitra enti-manohitra ny COVID.
Toerana iray tena fitodiana malaza ho an'ireo sambo mpitondra mpizahatany mitety izao tontolo izao i Cayman, efa nahavita nitily ny 20 isanjaton'ny mponina ao aminy ary nahita tranga 150. Drafitr'ireo manampahefana misahana ny fizahantany ao an-toerana ny fametrahana dingana iray fiverenana amin'ny laoniny, fa tsy mbola nisy ny daty voatondro. Kanefa, ny toetra tsy hay be ihany ananan'ilay viriosy dia naseho tamin'ny 3 Jona narahana fanambaràna hoe nisy zaza iray sivy taona voatily ho mitondra ilay otrikaretina – toedraharaha iray izay lazain'ny Lehiben'ny Vondron'ny Mpitsabo ao amin'ireo nosy ireo ho “mampalahelo”
Mandritra izany, iomanan'ireo vondrona hotely sy mpahazo tombontsoa amin'ny resaka fizahantany, ny fandraisana famandrihan-toerana sy fanaovana dokambarotra momba ilay faritra, ho toy ny toerana fitodiana tena ankafizin'ny maro. Amin'ny fanipihana ny tsy fahitàna afa-tsy isa faran'izay kely ao amin'ny faritra, manamafy ny tranonkala iray mpivarotra fivahinianana fa amin'ny volana Jona dia hiverina ho any amin'ireo nosy ao Karaiba ireo Amerikàna mpitsidika.
Kanefa, miaraka amin'ilay viriosy izay tsy mbola voahilika tanteraka any amin'ireo faritàny sasany izay efa mikasa ny hiverina hisokatra indray, ary ny tahotra hoe mety hanaparitaka loza ho an'ny mponina ao an-toerana ireo vahiny marobe, tazonin'ny ao Karaiba ihany ny toetsaina feno fitandremana.
Ny filoha amperinasa ao amin'ny Caribbean Community (CARICOM), ny praiminisitra ao Barboda, Mia Mottley, nilaza tao anaty antsafa iray niarahany tamin'ny BBC tamin'ny 26 May hoe:
Tsy ny daty no hibaiko antsika, fa izay soridàlana tsy haha-azon-tsampona antsika. […] Ezahantsika ny hampifandanja ny aina sy ny fitadiavana, toy ny olona rehetra ihany […] fa tena mahangoly ny fitomboan'ny tsy fanànana asa.
Nohitrikitrihan'i Mottley fa ho an'ny ampitso, ny “olana goavana” dia ny fanaovana fitiliana ireo mpitsidika; nanamafy izy fa amperiny izao ny adihevitra iarahana amin'ireo mpiara-mitan-tsoroka ijerena iray soridalana amin'ny antsipirihany momba ny fivezivezena. Ny nosy misy azy manokana, manana vahoaka 287.000, dia tsy nahitàna trangana COVID-19 efa ho andro enina izao; 11 ireo tranga hita tamin'ny volana May, ary nisy ny fitiliana lalina notanterahana. Raha nesorina ireo fandraràna momba ny fiantsenàna ary afaka mandeha eny amin'ny torapasika ao amin'ilay nosy ny olona, tsy mbola nanambara daty ho amin'ny fanokafana indray ny sisintaniny kosa ny governemanta ao Barboda.
Ao Jamaika, nohamafisin'ny praiminisitra, Andrew Holness, tao anaty tafa iray ho an'ny mpanao gazety fa ny CARICOM dia mitady fiarahana miasa momba ireo soridàlana vaovao ho an'ireo mpizahatany tonga avy any an-tseranany. Raha niresaka ny hoe “andavanandro vaovao,” dia hoy izy nanamarika:
Ireo soridàlana ireo dia mety tsy hitovy amin'izay ho ataon'ny firenena hafa, saingy amin'ny maha-vondrona iray, heveriko fa misy fahatakàrana ankapobeny momba izay ho endriky ny fivezivezena amin'ny hoavy.
Manelingelina izy io ho an'ireo governemanta ao Karaiba, tery eo anelanelan'ny olan'ny fahasalamàm-bahoaka mianjady amin'izao fotoana izao sy ny zavamisy ao amin'ny toekarenan'ny faritra iray miankina betsaka amin'ny fizahantany, izay mitangolingolika midina ankehitriny. Ny Ivontoerana Fandrindràna ao Jamaika dia naminavina fifanoherana goavana eo amin'ny harinkarena faobe (PIB) ho an'ny telovolana Aprily hatramin'ny Jona, voalohany indrindra noho ireo fepetra noraisina hiadiana amin'ilay valanaretina.
Misy singa iray manampy trotraka tsy maintsy ampidirina ao anaty kajy, izay notondroin'ny filohan'ny CARICOM: ny 1 Jona no daty ofisialy fanombohana ho an'ny vanimpotoanan'ny rivomahery 2020 any Atlantika, vanimpotoana iray iatrehan'ny ao Karaiba safotofoto tsy mitsaha-mitombo, noho ny fiantraika miha-henjana hatrany ateraky ny fiovaovàn'ny toetrandro. Tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa, nitombo hery hatrany ireo rivodoza, arahana fiantraika mandravarava.
Voaporofo fa ho taonan'ny fanamby marobe ny 2020, ary zava-tsy ampoizina goavana ho an'i Karaiba. Ho lasa miaraka amin'ny COVID-19 ve ny ratsy indrindra ho an'ilay faritra? Mbola aloha loatra raha izao sahady no hilaza izany, saingy toa mbola ho be ny sedra ho diavina.
Jamaika 1 herinandro izay